Confidence အမြဲတည်ရှိဖို့ဆိုတာ – Live the Dream
သင့်မှာ Confidence ပျောက်ဆုံးနေတာလား? ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု Confidence ဆိုတာက သင်ယူမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုလုပ်ကိုင်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် တွန်းပို့ပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Confidence ရှိတဲ့လူနဲ့ မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ Achievement လည်း ကွာခြားတယ်ဆိုတာလဲ လက်တွေ့ပါပဲ။ Confidence ဆိုတာက သူ့ဟာသူဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်သလို ရှိနေရင်လည်း အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တဲ့ မူဆယ်တစ်ဖက်ကမ်းက China မိတ်တွေလိုပါပဲ။ ဥပမာပေးရရင်တော့ Confidence က အဆောက်အအုံတစ်ခုလိုပါ။ ဆောက်ပြီးရင်လည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ ရည်ရှည်တည်တန့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့မှာ ကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ ရှိနေပေမယ့် နောင်နေ့မှာ စိတ်တိုင်းကျ မဖြစ်တဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုကြောင့် ကိုယ့်အရည်အချင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အပေါ် ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးတာမျိုးဖြစ်ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ပျောက်ဆုံးလွယ်တဲ့ Confidence ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ ပြန်လည်ရှာနိုင်ဖို့ က တစ်ချို့သော လူတွေအတွက် ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှု မခိုင်သေးတာက သွားနေတဲ့ခရီးမှာ ရပ်နေတာမျိုး ရှေ့သွားလိုက်နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်နဲ့ ပန်းတိုင်ဆီမရောက်တာမျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ အတားအဆီးတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို နှောင့်ယှက်နေတဲ့အရာကို ဘယ်သူမဆို ရှင်းပစ်ချင်တဲ့ လူတွေချည်းပဲလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုမခိုင်မြဲတဲ့သူတွေအတွက် ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီထင်ပါတယ်ဗျာ…။ ကဲ…. ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်း Confidence ခိုင်မြဲဖို့ဘာတွေလိုမလဲ တူတူ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
လူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝကိုထဲက အမြင့်ကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်တယ်၊ အကြီးကြီးတွေတွေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တဲ့နေရာမှာလည်း နည်းနည်းပိုတွက်လိုက်ရမှ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးထင်ပြီး တကယ့်တကယ်ကျတော့ ထင်သလောက်မလုပ်နိုင်တာကိုသိလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုကို စိတ်ပျက်သွားတတ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းအပေါ်ယုံကြည်မှုတွေက ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အရည်အချင်းမရှိဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကို လျှော့တွက်တဲလူတွေအတွက်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှု ဘယ်လိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလဲ?? ။ ဒီလို Over thinking, Under thinking တွေက ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှု အပေါ်ဖျက်ဆီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်တဲ့အမြင်က ရိုးသားဖို့၊ အရှိကိုအရှိအတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးတဲ့ရောဂါကို ကုစားဖို့လိုသလို ကိုယ့်ကိုကို အောက်ဆွဲချတာမျိုးတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်လိုက်ကြစို့ဗျာ…။
လှတောသားတွေအကြောင်းမှာ စပါးပုံ အမြင့်ကို ခေါင်းမော့ပြီးမျှော်ကြည့်ရတာ ခေါင်းပေါင်းတောင်ကျွတ်တဲ့အကြောင်းကို ငယ်ငယ်က ကြားဖူးသင်ဖူးမှာပေါ့..ပြောချင်တာက ခေါင်းပေါင်း ကျွတ်ကျလောက်ထိအထိ ခေါင်းမော့ပြီးမျှော်မနေဖို့ပါ။ ဒီထက်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အိုဗာတင်းမဖြစ်ဖို့ပါ။ တစ်ချို့သော သူတွေကို တွေ့ဖူးပါတယ် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်တယ် အကြီးကြီးမျှော်လင့်တယ်၊ မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းရလာတဲ့သူရှိသလို၊ မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းရမလာသူတွေလည်းရှိတယ်။ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုစတဲ့ အနိမ့်အမြင့် သဘာဝတရားတွေကို စိတ်ခိုင်ခိုင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သတ္တိနည်းနေသေးတဲ့ ကိုယ့်လို သူ့လိုလူတွေအတွက်ကတော့ အစထဲက မျှော်လင့်ချက်အတော်အတန်ထားတာပဲကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အောင်မြင်ရမယ်လို့အကြီးကြီး မျှော်လင့်ပြီး ထင်သလောက်မအောင်မြင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးတတ်လို့ပါ။ အောင်မြင်တာ မအောင်မြင်တာက ကိုယ်သွားဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဟေ့…အောင်မြင်စမ်းဆိုပြီး အမိန့်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်အရေးကြီးဆုံးအရာကလည်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ဖို့ပါပဲ။ အဆိုးလည်းကြုံနိုင်တယ်၊ အကောင်းလည်းကြုံနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းပေါင်းကျွတ်လောက်တဲ့အထိ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ တော်ရုံလောက်ဆို ရပါပြီဗျာ….။
၃။ သင်္ချာ ဂဏန်းတွေ
သူ = ငါ
သူ > ငါ
သူ < ငါ
သင်္ချာသာ ညံ့ချင်ညံ့မယ် သူများနဲ့ ညီမျှခြင်းချတာ၊ သူများထက် ကောင်းမကောင်းနှိုင်းယှဉ်တာမျိုးတွေမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ထူးချွန်ကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူများထက်သာချင်ကြတယ်လေ..သူများထက်သာနေမှ နေသာထိုင်သာရှိကြတာကိုး…။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ထူးချွန်နေတဲ့အရည်အချင်းတွေ၊ သူနေရာနဲ့သူအသုံးတည့်မှုတွေ ရှိတာကိုသိတယ် ဒါ့ပေမယ့် သူများတွေနဲ့ တိတ်တခိုးယှဉ်ပြိုင်နေကြဆဲပါပဲ။ သူက ကိုယ့်ထက်သာမှာလည်း စိုးရသေးတယ်လေ..။ သူများကိုယ့်ထက်သာမှာစိုးတဲ့စိတ်နဲ့ ပညာသင်ယူနေတယ် အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတိုးတက်မှုအတွက် ကိုယ့်ဖြည့်ဖို့လိုလဲဆိုတာ ဦးတည်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်၊ ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းကို မသိတဲ့သူတွေ ဒုနဲဒေးဖြစ်လာပါတယ်။ သူများတွေကိုယ့်ထက်သာအခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ့်အရည်အချင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစက ဘာမှမရှိပါလား ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ လုံး၀ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ မကောင်းမှန်းသိတဲ့ အကျင့်တွေကို မီးရှို့ပြာချလိုက်ပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အားသာချက်တွေကိုပဲ မြင်အောင်ဖော်ထုတ်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းတိုးတက်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို လည်း မြင့်တင်လိုက်ပါ။ ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့လူတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မနေပါနဲ့….သင်္ချာတွေ သိပ်မတွက်ပါနဲ့နော်.။
၄။ ခွန်အား လိုတယ်
လူဆိုတာ ကြိုးစားရင်းနဲ့ ပြိုလဲမယ်၊ ယိုင်လဲမယ်ဆိုတာ သဘာဝတရားသတ်မှတ်ပေးထားပြီးသားပါ။ အမြဲတမ်း ရပ်မနေနိုင်ဘူး လဲကျကိုကျရမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေ လည်းအမြဲတမ်းတောင့်မခံနိုင်ဘူး အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် တစ်ချိန်ချိန်တော့ လျော့နည်းလာရမှာ.. ငြင်းဆန်လို့မရဘူး။ ဒါတွေကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကျတော့ ဘာတွေလိုလဲ?? ကျွန်တော်တို့ ရေဆာနေတဲ့အချိန် ရေပေးမယ့်သူကို တမ်းတနေတတ်တာ လဲနေတဲ့အချိန်ထူပေးဖို့ လက်တစ်စုံ မျှော်လင့်နေတတ်တာက လူ့သဘာဝပါ။ ဒါ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ စွမ်းအားတွေ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့က တွန်းအားတွေလိုအပ်ပါတယ်။ တွန်းအားတွေကရောဘာတွေလဲ?? ဒီအတွက် ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဒ်တစ်ခုက ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေပါပဲ။ ကိုယ့်ကို အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေဆီက အားပေးစကားတွေ၊ အကြံပေးစကားတွေက အရှုံးတွေကြားမှာ၊ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘဝမှာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးတွန်းအားတစ်ခုပါပဲ။ သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ကိုယ့်အတွက်အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကို ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေကပဲ မြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Confidence တွေပျောက်ဆုံးပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အခါ သင့်ကို ချစ်တဲ့ သင့်ရဲ့ မိသားစု၊ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေ၊ သင့်ကို အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေကို အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး တိုင်ပင်လိုက်ပါနော်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းအားတွေ ဘယ်လောက်ကြီးမားလည်းဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးကို တဖန် ပြန်လည်ပြလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုက ဝမ်းနည်းစရာဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဘယ်ကဝင်လာမှန်းမသိတာပါ။ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ရွဲ့ပြောတာပါ။ တကယ်မုန်းဖို့ကောင်းတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့အခါမျိုးကျမှ ဝင်လာတတ်တယ်။ မပြည့်စုံလို့၊ ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်လို့၊ မကူညီကြလို့ ဒီလိုမျိုးသိမ်ငယ်စိတ်တွေရော၊ ကိုယ်မကြိုးစားခဲ့လို့ အသုံးမကျဖြစ်နေတဲ့မိုက်ပြစ်တွေရော၊ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေကို မိုက်ရိုင်းခဲ့လို့ နောင်တတရားတွေရော၊ ချစ်သူထားခဲ့လို့ ကျန်ရစ်ဘဝလေးတွေရော ခံစားချက်တွေ ဒရာမာဇတ်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဘယ် Channel ကနေလာမှန်းမသိတဲ့ ဒီလိုဝမ်းနည်းစရာဇာတ်လမ်းတွေကို ခံစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေမှုကြောင့် ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေရတဲ့ကြားထဲ တစ်ပူပေါ် တစ်ပူဆင့်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Drama Series တွေက ဆက်တိုက်လာနေမှာပါ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းတဲ့အထိမစောင့်ပဲ ခေါင်းထဲစဝင်လာတာနဲ့ ဇာတ်သိမ်းပစ်လိုက်ပါ။ အနာပေါ် တုတ်ကျရင်ပိုနာသွားမှာပေါ့။ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးလို့ နာကျင်နေတဲ့ခံစားချက်နေအပေါ် ထပ်ပြီး Drama ခင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်မထနိုင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Drama တွေကို ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပေးလိုက်ပါတော့…
Confidence ပျောက်နေတာက ကိုယ့်ရဲ့ ခရီးအစမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ခရီးတစ်ဝက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ပန်းတိုင်ရောက်ခါနီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းတိုင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တောင် အခက်အခဲတွေ့နိုင်သေးတာကြောင့် ရေဆန်ကို လှော်ခတ်နေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရဲ့ အစမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အလယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှိန်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာဖတ်လာတဲ့အချက်တွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှိန်မြင့်တက်ဖို့ကို အထောက်အကူပေးနေမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အနှောင့်အယှက်မှန်သမျှကို တိုက်ထုတ်ပြီးရှေ့သာသွားပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းစေမယ့် အရာတွေ တွေ့ဆုံရဦးမှာပါ။ ဒါတွေနဲ့သွားမှလည်း ကိုယ့်ဘဝက တိုးတက်မှုရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောက်နေလို့မရဘူး။ သတ္တိအပြည့်နဲ့ ငါကွဆိုပြီး ရှေ့တိုးရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းအပေါ်ယုံကြည်မှု ခိုင်မြဲတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ရှေ့မှာ အောင်မြင်မှု မိုင်တိုင်တွေက ဆီးကြိုနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆက်လက်ကြိုးစားလှော်ခတ်နေရဦးမှာနော်..
ကဲမိုင်တိုင်တွေလည်းကျော်ဖြတ်ရဦးမယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေ ခိုင်မြဲအောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိသလောက်လေး ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျရင်လည်း မမေ့ကြပါနဲ့နော်……